Ezona zicelo zibalaseleyo zokulawula iifoto kwi-Android | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UElvis bucatariu | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Ukufota
Ngelixa owona msebenzi uphambili wokuhambisa unxibelelwano, ukufota yeyona nto yesibini isetyenziswayo namhlanje ngaphandle kokwenza iminxeba okanye imiyalezo ebhaliweyo. Izigidi zeefoto zithathwa yonke imihla kwaye inyani kukuba ngomgangatho weekhamera zanamhlanje, nabani na angathatha ifoto entle ngefowuni yakhe.
Oko kwathethi, kwisithuba esilandelayo siza kukucebisa ngezinye zezona zicelo zolawulo lweefoto ezisimahla kwi-Android.
1 Iifoto zeGoogle
2 umfanekiso okhawulezayo
3 Crunch Igalari
4 Ibhokisi yesilayidi
Kudala ndisebenzisa Iifoto zeGoogle ukusukela ngomhla wokuqala yaphuma, kwaye namhlanje iseyimveliso eqinileyo. Isenokungalayishi iifoto ngokukhawuleza njengezinye ii -apps, kodwa ngokungafaniyo nezinye, iiFoto zikaGoogle zibonelela ngento egcina ngokuzenzekelayo nangokungasikelwanga mda zonke iifoto kunye neevidiyo ozithathayo ngekhamera yakho, kunye nenjini enamandla yokukhangela imifanekiso.ukhangelo olukwaziyo ukubona ubuso , izinto kunye nokunye okuninzi.
Zonke iifoto zakho ziya kuba ne-backup yazo ehambelanayo ngokusekwe kuseto lwangaphambili, kwaye unokuphinda uzithathe zombini iifoto kunye nevidiyo ukuba unqwenela njalo
Ukuba ujonga isicelo sokutshintsha isixhobo se "Igalari" kwiselfowuni yakho, i-QuickPic lukhetho oluhle kakhulu, ukukhanya kakhulu kunye nokukwazi ukulayisha iifoto ngokukhawuleza kunaso nasiphi na isicelo segalari. Isenokungabi nazinketho zininzi njengeeFoto zikaGoogle, kodwa i-QuickPic ikwanenkxaso yeenkonzo zokugcina ilifu ezinje ngeGoogle Drayivu, iDropbox, iFlickr, iDrive enye, iBhokisi, i-500x, kunye nabanye, kwaye kukho ukhetho lokufihla iifoto kunye neevidiyo ezifuna ukuzigcinela okwakho kuphela.
Nangona ifana ne-QuickPic ngandlela ithile, umahluko ophambili kukuba igalari yeCrunch inciphisa ubungakanani beefoto zakho ukuya kuthi ga kumaxesha ama-6, kunye nobungakanani beevidiyo zakho ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50. Crunch isebenzisa itekhnoloji yayo ukufezekisa ezi ziphumo, ukongeza ekunikezeleni nge-1GB yendawo yasimahla enokwandiswa.
Umthuthukisi: Qalisa iMediaWorks LLC
Xa usiya kuhambo okanye uye kumnyhadala obalulekileyo, mhlawumbi unamakhulu efoto ezithathiweyo, ezinye zingcono kunezinye. Kulapho ibhokisi yesilayidi ingena khona, isicelo esiza kukunceda ukuhlela iifoto kwaye lahla ukufota okufipheleyo. Ukwenza oku kuya kufuneka uslayide umnwe wakho kwiifoto ongafuniyo ukuzigcina. Kukho ukhetho lokuthelekisa iifoto eziphindiweyo.
Ibhokisi yesilayidi-Umququzeleli wezithombe
Sesiphi isicelo osithandayo sokulawula iifoto zakho kwi-Android?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ezonaapps zilungileyo kulawulo lweefoto kwi-Android
Ngokuqinisekileyo iifoto zikaGoogle. Ngapha koko, xa ugcino lwenziwe, ikunika ithuba lokucima iifoto osele uzikhusele kwaye ngaloo ndlela ukhulule indawo kwikhompyuter yakho. Nangona ndisebenzisa iMega ngeakhawunti ye50gb.
Eyona midlalo mitsha ye-Android ilungileyo kaMeyi 2017